माघ १ देखि घटना र समाचार बारे जानकारी लिन हेल्प डेक्स टिम, त्यो पनि २४ सै घण्टा ! « News24 : Premium News Channel
माघ १ देखि घटना र समाचार बारे जानकारी लिन हेल्प डेक्स टिम, त्यो पनि २४ सै घण्टा !
प्रकाशित मिति : Jan 08, 2019
आज नयाँ कुरा गरौं । परिर्वतनको कुरा गराँै । सानो उदाहरण स्वरुप कार्यक्रमको लोगो, स्टुडियोको थोरै परिवर्तित स्वरुपले तपाइको अलिकति ध्यान तान्यो नै होला । विभिन्न चरणमा मानिसलाई नयाँ उर्जा र नयाँ जोश जागरको आवश्यकता पर्दछ ।
त्यसैले आजैको दिन हामी अझ सशक्त हुने जानकारी दर्शकहरुलाई बाँड्न चाहान्छाँे । आजदेखि हामीले एनटिसीका प्रयोकर्ताका लागि मात्र होइन एनसेलका ग्राहकका लागि पनि टोल फ्री नम्बर राखेका छाँै । १६६००११२४२४ एनटिसिको ग्राहकका लागि थियो भने ९८०१५७२्र४२४ एनसेलका ग्राहकका लागि पनि आजैबाट थपेका छौँ ।